Malunga Better - Shandong Better Motor Co., Ltd.
Imoto ebhetele yaphuhliswa ivela kumasifundisane weeMoto weShandong Fada Group Corporation, eyayiliqumrhu likarhulumente. I-Shandong Fada Group Corporation eyasekwa ngo-1976, eyayinguvulindlela we-elektroniki fan kunye nomshini wokucoca i-vacuum e-China.
Ngama-1980, inkampani yazisa ngeendlela zobumanzi nezomileyo zokucoca inkampani evela kumbane we-ELECTROSTAR ovela eJamani, ingenise imigca yokuqhubela phambili yemveliso yeemoto ezivela eUSA, Japan naseSwitzerland. Yayiyinkampani yokuqala e-China eyaphumelela kwimveliso yobuninzi bee-motor.
Emva kokufunda kunye nokufunxa kubuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo ngaphezulu kweminyaka eyi-10, iphumelele ngempumelelo uthotho lweemoto zokucoca uxinzelelo oluphezulu endaweni yokungenisa kwelinye ngo-1999. Ngo-Epreli 2000, iLongkou Better Motor Co, Ltd yabhaliswa ngempumelelo eyayiyimfihlo ishishini elidibeneyo lesitokhwe. Ngo-Sep. 2005, inkampani yatshintsha igama laba yiShandong Better Motor Co, Ltd.